कम टी: लक्षण, कारण, र टेस्टोस्टेरोन उपचार - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
खेलहरु समाचार, कल्याण औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य समाचार मनोरञ्जन समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी कम्पनी, समाचार चेकआउट भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> तपाईलाई कम टीको बारेमा के जान्नु आवश्यक छ
टेस्टोस्टेरोन एक यौन हार्मोन हो, मुख्यतया पुरुषहरूसँग सम्बन्धित- यद्यपि महिलाहरूको निकायले यसलाई थोरै परिमाणमा पनि बनाउँछ। यो मुख्यतया अण्डकोष द्वारा उत्पादित हुन्छ, र यसले सेक्स ड्राइभ, शुक्राणु उत्पादन, हड्डी स्वास्थ्य, मांसपेशि समारोह, र कपालको बृद्धि गर्न मद्दत गरेर शरीरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जब तपाईंको शरीर पर्याप्त उत्पादन गर्दैन, तपाईं सुन्न सक्नुहुनेछ यो कम T, टेस्टोस्टेरोनको कमी, वा को रूपमा जनाइएको छ पुरुष hypogonadism । तपाईंको डाक्टरले जेसुकै बोलाए पनि, कम टेस्टोस्टेरोनको स्तरले तपाईंलाई थकित, उन्माद वा सेक्समा रुचि नभएको महसुस गराउन सक्छ - साथै अन्य सम्भावित लक्षणहरूको साथ।
तर तपाईंले लामो सास लिनु पर्दैन र यसलाई स्वीकार्नु पर्दैन।
म पुरुषहरूलाई उनीहरूको [स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू ]सँग उनीहरूका थोरै लक्षणहरू र गुनासोहरूबारे छलफल गर्न आग्रह गर्दछु, युरोलोजिस्ट जे न्यूमार्क, एमडी, बेलारुस थेरापीटिक्सका प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भन्छन्। चाहे ती टेस्टोस्टेरोनको स्तरसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ एक उपचार उपलब्ध हुन सक्छ जुन उसको समग्र जीवनस्तर सुधार गर्दछ।
के हुन्छ जब एक मानिस टेस्टोस्टेरोन कम छ?
तपाईं सोचमा हुनुहुन्छ कि तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ यदि तपाईंको टेस्टोस्टेरोनको स्तर कम हुनुपर्दछ भने। यस अनुसार अमेरिकी यूरोलोजिकल संघ (AUA), कम टेस्टोस्टेरोनको केहि सामान्य लक्षणहरू समावेश गर्दछ:
मांसपेशीहरुको मात्रा घटाइयो
शरीरको कपालको घाटा
यदि तपाइँसँग कुनै लक्षणहरू छन् भने, तपाइँको स्तर जाँच गर्ने बारे एक डाक्टरलाई हेर्नुहोस्, भन्छ ट्रेसी गापिन , MD, aबोर्ड-प्रमाणित यूरोलोजिस्ट रको संस्थापकस्मार्ट पुरुषहरूको स्वास्थ्य।
यो राम्रो विचार हो किनभने कम T अन्य मेडिकल अवस्थाको लागि भ्रमित हुन सक्छ लियो निस्सोला , एमडी, क्यान्सर इम्यूनोथेरापीको लागि पार्कर संस्थानमा क्लिनिकल विकास टोलीका सदस्य। डा। निस्कोला भन्छन्, कम टेस्टोस्टेरोन उत्पादनबाट पीडित बिरामीहरूलाई डिप्रेसनको साथ गलत निदान हुन सक्छ किनभने केहि लक्षणहरू ओभरल्याप हुन्छन्, जस्तै यौन गतिविधिमा चासोको कमी र ऊर्जाको कमी, डा। निसोला भन्छन्।
सम्बन्धित: इरेक्टाइल डिसफंक्शन डाक्टर कसरी पत्ता लगाउने
टेस्टोस्टेरोनको सामान्य दायरा के हो?
यदि तपाईं कम टीको लक्षणहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ र उनीहरूको लागि अर्को कारण पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न भने, तपाईंको डाक्टरले सीरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट सुझाव दिन सक्छ, जुन रगत परीक्षण हो जुन तपाईंको रगतमा टेस्टोस्टेरोनको मात्रा मापन गर्दछ।
स्वस्थ वयस्क पुरूषको लागि टेस्टोस्टेरोनको सामान्य तह कुनै पनि मुद्दाहरू बिना टेस्टोस्टेरोन उत्पादन दायरामा असर गर्दैन प्रति डेसिलिटर 350 350० नानोग्राम र 5050० एनजी / डीएल बाट । अमेरिकी यूरोलोजिकल एसोसिएशन (एयूए) का अनुसार कटफ the०० एनजी / डीएल लाईन हो - त्यो हो, टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा रहेका पुरुषहरू n०० एनजी / डीएल भन्दा तल झर्दा उपचारबाट सम्भावित फाइदा लिन सक्छ।
कम T निदान सही तरीकाले बनाउनको लागि, टेस्टोस्टेरोनको स्तर राम्रोसँग जाँच्नु महत्त्वपूर्ण छ अर्थात् राति छिटो पछिaबिहान9देखि बिहान between बिहानको बीचमा।
कम टेस्टोस्टेरोनको मुख्य कारण के हो?
कम T को सब भन्दा ठूलो कारण मध्ये एक हो। सामान्यतया एक व्यक्तिको टेस्टोस्टेरोनको स्तर चरमको उमेरमा ऊ २००० वा शुरुको दशकको शिखरमा, त्यसपछि बिस्तारै ड्रप हुन्छ। यद्यपि, कम टी निश्चित जन्मदिन पछि सबै पुरुषहरूको लागि पूर्वानुमान होइन। धेरै बुढा पुरुषहरूले कहिल्यै ड्रप अनुभव गर्दैन जुन कुनै लक्षणहरूको लागि पर्याप्त महत्वपूर्ण छ। (एयूए अनुमान गर्दछ कि लगभग २.१% पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोनको कमी हुन सक्छ।)
साथै, धेरै विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन् कि उमेर एक्लै जिम्मेवार हुन सक्दैन; केहि स्वास्थ्य सर्तहरू जुन पुरुषहरूले अधिक प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ उनीहरूको उमेरले टेस्टोस्टेरोन उत्पादन घट्न योगदान पुर्‍याउँछ, जस्तै मधुमेह र मोटापा।
तर त्यहाँ अन्य कारकहरू छन् जसले तपाईंको टेस्टोस्टेरोनको स्तरहरू निम्त्याउन सक्छ:
Testes लाई चोट लाग्यो
पिट्यूटरी ग्रंथीको डिसफंक्शन
केमोथेरापी वा विकिरण उपचार
आनुवंशिक अवस्था जस्तै Klinefelter सिन्ड्रोम
त्यहाँ केहि प्रमाणहरू छन् जुन केहि खानाले कम टी लेभलमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ, जस्तै: सोया उत्पादनहरू, मदिरा, पुदीना, लाईकोरिस, फ्याक्ससीडहरू, र केहि प्रशोधित खाद्य पदार्थ जुन ट्रान्स-फ्याट वा चिनीमा उच्च हुन्छन्। थप अनुसन्धान आवश्यक छ, तर यसले तपाईंको आहारबाट केही हटाउन को लागी चोट पुर्‍याउँदैन।
कम टी उपचार
जब उपचार नगरिएमा, कम टेस्टोस्टेरोनले जीवनको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउन सक्छ वा कम हड्डीको घनत्व। भाग्यवस, टेस्टोस्टेरोन थेरापी र प्राकृतिक उपचारहरू उपलब्ध छन् र धेरै पुरुषहरूलाई उनीहरूको कम टेस्टोस्टेरोनको प्रभावहरूको प्रतिकार गर्न र सामान्य यौन समारोहमा फर्कन मद्दत गर्दछ।
मलाई लाग्छ कि तपाईंको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकसँग बिभिन्न विकल्पहरूको बारेमा छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, डा। न्यूमार्क भन्छन्।
Vicodin र norco एउटै कुरा हो
को टेस्टोस्टेरोन उत्पादनहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित शामिल:
सामयिक जेलहरू: तपाईं टेन्डोस्टेरोन जेल, जस्तै Androgel लाई लागू गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको काँध वा तपाईंको माथिल्लो पाखुरा प्रत्येक दिन एकै समयमा।
क्रीमहरू: तपाईं पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छaस्क्रोटमको छालामा टेस्टोस्टेरोन युक्त क्रीम ।
नाक जेलहरू: राशि र संख्या तपाइँ प्रयोग गर्न आवश्यक यो जेल फरक हुन्छ। धेरै पुरुषहरूले टेस्टोस्टेरोनको स्तर बढाउन दिनको तीन पटक उनीहरूको नाकमा यो टेस्टोस्टेरोन जेल राख्नु पर्छ।
प्याचहरू: यो लागू गर्नुहोस् ट्रान्सडर्मल प्याच दिनको एक पटक, प्रत्येक दिनको स्थानहरू फरक बनाउँदछ।
इंजेक्शनहरू: तिमी सक्छौ टेस्टोस्टेरोन समाधान इन्जेक्स गर्नुहोस् तपाईंको छाला अन्तर्गत (subcutaneous) वा तपाईंको मांसपेशीमा (इंट्रामस्क्युलर)।
गोलीहरु: गोलीहरु, जुन तपाईको छाला अन्तर्गत शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित गरिन्छ, धेरै महिनाको अवधिमा तपाईको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन रिलीज गर्दछ। एउटा दोष: तपाईले स्तरहरू समायोजित गर्न सक्नुहुन्न एकपल्ट जब यो बिस्तारण गरिए पछि त्यसलाई हटाउने समय हुन्छ, डा। गापिन भन्छन्।
मौखिक उपचार: तपाईं मौखिक क्याप्सूलको लागि प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यदि उपयुक्त छ भने , वा एउटा सानो प्याच जुन तपाईंले आफ्नो गममा आफ्नो दाग दाँत मध्ये एक माथि राख्नुहुन्छ।
धेरै व्यक्तिहरू यी मध्ये एउटा उपचार मात्र ठीक गर्छन्। तर यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ: टेस्टोस्टेरोन थेरापी सबैका लागि होईन। यी उपचारका मुद्दाहरू देखि स्तन विस्तार गर्न देखि मुड स्विंग सम्म साइड इफेक्ट हुन सक्छ।
थप रूपमा, योसँग अन्य, सम्भावित गम्भीर डाउनसाइडहरू हुन सक्छन्। टेस्टोस्टेरोन उपचारले तपाईंले लिनु भएका अन्य औषधीहरूको साथ हस्तक्षेप गर्न सक्छ। टेस्टोस्टेरोन थेरापीले बांझपन निम्त्याउन सक्छ , जुन यो प्राय जसो मामिलामा अस्थायी हुन्छ, तैपनि केही पुरुषहरू, विशेष गरी युवा पुरुषहरूको लागि एक सम्झौता हो। र त्यहाँ लामो अवधि को उपयोग बाट जोखिम बढ्न सक्छ। उदाहरण को लागी, विशेष गरी 65 65 बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरुमा, दीर्घकालीन टेस्टोस्टेरोन थेरापी एक संग जोडिएको छ हृदय रोग को वृद्धि वा हृदयघात
डा। न्यूममार्क नोट गर्दछ कि एक साथ पुरुषहरू ठूलो प्रोस्टेट जसले पेशाब गर्न कठिनाई अनुभव गर्दछ त्यसले टेस्टोस्टेरोन थेरापीले उनीहरूको अवस्था झन खराब बनाउँछ। टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट क्यान्सरको बृद्धिका लागि मुख्य ड्राइभर हो, डा। निस्सोला। त्यसकारण टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन थेरापी [TRT] पुरुषहरूको लागि सिफारिस गरिदैन प्रोस्टेट क्यान्सर , प्रोस्टेट मा एक नोडुल, वा PSA तीन ng / ML भन्दा ठूलो।
एंडोक्राइन सोसाइटीले सिफारिस गर्छ कि यदि कसैलाई स्लिप एपनिया छ भने टेस्टोस्टेरोनको उपचार गर्नु भन्दा पहिले यसको उपचार गरिनु पर्छ। समाजले अधिक तौलका मानिस र रातमा खर्राउनेहरुमा स्लीप एपनियाको लागि स्क्रीनिंग पनि सिफारिस गर्दछ।
डा। गापिनले प्रायः आफ्ना बिरामीहरूलाई टेस्टोस्टेरोन थेरापीभन्दा बाहिर सोच्न लगाउँछन्। टेस्टोस्टेरोन थेरपी एक्लोले तपाईंलाई आवश्यक पर्ने चीज दिदैन, ऊ भन्छ। हामीले सम्पूर्ण शरीर विस्तृत दृष्टिकोणमा ध्यान दिन जरुरी छ।
तपाईंको स्वास्थ्यको केहि क्षेत्रहरू जुन तपाईं सुधार गर्न कार्य गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको टेस्टोस्टेरोन स्तरलाई मद्दत गर्दछ:
थप निद्रा पाउनुहोस्। राम्रो गुणस्तरको निद्रा, डा। गापिनलाई योग्य बनाउँछ। अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि खराब गुणस्तरको निद्राले टेस्टोस्टेरोनको स्तर क्रस गर्न सक्छ।
तपाईको तनाव स्तर कम गर्नुहोस्। जब तपाईं क्रोनिक तनावग्रस्त हुनुहुन्छ, तपाईंको शरीरले हर्टोनको धेरै उत्पादन गर्दछ कोर्तिसोल भनिन्छ। टेस्टोस्टेरोनको स्तरलाई पनि यसले चक्नाचूर पार्छ, डा। गापिन भन्छन, जसले आफ्ना बिरामीहरूले माइन्डफुलनेस मेडिटेशनलगायत धेरै सम्भावनाहरू विचार गर्दछन्।
नियमित व्यायाम गर्नुहोस्। तर केवल भाग्नुहोस् वा बाइक चलाउनुहुन्न, डा। गापिन भन्छन्। मांसपेशीहरु को निर्माण र शरीर को बोसो कम गर्न को लागी केहि वजन या शक्ति प्रशिक्षण मा फिट।
स्वस्थ आहार खानुहोस्। केही अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ भारी, प्रशोधित खाद्य पदार्थहरूमा फर्केर डायल गर्ने उपयोगी हुन सक्छ, जबकि अन्य अनुसन्धान कम फ्याट डाइट खाने पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा आएको गिरावट दर्ता गरिएको छ। सामान्यतया, एक स्वस्थ, राम्रो-सन्तुलित आहार खाए पनि तपाईं स्वस्थ शरीरको वजन कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
जोन मार्टिनेज, MD , पनि सिफारिश गर्दछ कि उसका बिरामीहरूले रक्सी कम वा बेवास्ता गर्नुहोस्, किनकि अनुसन्धान शो त्यो रक्सीको प्रयोगले शरीरको टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन बिगार्न सक्छ।
कोही पनि कम टेस्टोस्टेरोनको साथमा निदान गर्न चाहँदैन, तर शुभ समाचार यो छ कि प्राय जसो केसहरू उपचार योग्य छन्। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग काम गर्नुहोस् तपाईंको लागि उपयुक्त योजना उपचार पत्ता लगाउन।
सेन्डेरा बनाम भियाग्रा: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
बिसाकोडिल लाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
कसरी एक मानिस मा एक खमीर संक्रमण को उपचार गर्न को लागी
कसरी उच्च रक्तचाप शान्त गर्न
कति र कहिले सम्म तपाइँ ibuprofen लिन सक्नुहुन्छ?